Fahaizana manadala ny Mac OS X Panel Panel
Fantaro ny antony mahatonga ny Mac ou ho amin'ny fisisihana
Ny iray amin'ireo zavatra mahatsiravina izay azon'ny mpampiasa Mac dia ny fahatsapana kernel , izay rehefa mijanona ao anaty làlany ny Mac, dia manarona ny fampisehoana, ary mametraka ilay hafatra hoe: "Ilainao ny manasaraka ny ordinateranao. mihodina. "
Raha hitanao ny hafatr'i kernel panic, mialà aloha, miala sasatra; Tsy misy na inona na inona azonao atao amin'io fotoana io mba handehanana any ivelany raha tsy hoe hanombohana ny Mac ianao.
Atsipazo ny jironao aorian'ny fonosana kernel
Rehefa mahita ny hafatra vaovao ianao, dia tsindrio ny bokotra herinaratra raha vao manomboka ny Mac.
Amin'izao fotoana izao, fotoana izao hanandramana hamantatra ny tsy mety, na farafaharatsiny ny fomba ahafahanao miverina amin'ny Mac ny Mac. Ny vaovao tsara dia ny fahazoana ny Mac miasa indray dia mety ho tsotra toy ny famerenana azy indray. Tao anatin'ny taona rehetra niarahako niasa tamin'ny Mac sy nanome fanohanana ara-teknika, tsy nahita afa-tsy ny mijery ny efitranon'ny fonosana kernel mifandraika amin'ny Mac tsy mety. Na dia afaka nanamboatra ny Mac aza izy ireo, saingy fialantsiny tsara ny hisolo toerana izany.
Inona no miteraka fihenam-bidy?
Misy antony vitsivitsy ahafahan'ny Mac mety hanakorontana ny kernel, saingy ny ankamaroan'izy ireo dia miala vetivety ary mety tsy ho hita indray. Anisan'izany ny fampiharana malaza, plug-ins , add-ons, mpamily ary ireo fitaovana rindrambaiko hafa.
Imbetsaka ianao no mahita kiran'ny kernel raha misy toe-javatra tsy mahazatra, toy ny fampiharana roa na maromaro mihazakazaka rehefa ampiasaina ny ankamaroan'ny fahatsiarovanao . Ny fanombohana tsotra ny Mac dia hanitsy ny olana.
Indraindray dia mitsidika tsindraindray ny fikorontanan'ny kernel, saingy tsy dia manara-penitra matetika, fa matetika dia ampy ho reraky ny mahita izany.
Amin'ireo tranga ireo, ny olana indray dia matetika mifandraika amin'ny rindrambaiko, saingy mety ho tsy mahomby koa ny fitaovana maoderina, na ny fametrahana rindrambaiko sy ny olana momba ny fiarovana, toy ny fiatoana diso amin'ny mpamily fiara manokana, toy ny mpanonta iray.
Ny pensilihazo kendrentsika indrindra dia ny iray izay mitranga isaky ny manandrana manomboka ny Mac. Amin'ity tranga ity, ny olana dia matetika mifandray amin'ny fitaovana, saingy mbola mety ho toy izany ihany koa ny ordinatera na ny mpamily.
Mamolavola Panike Kernel
Koa satria ny ankamaroan'ny fotoana dia mitranga ny fikorontanan'ny kernel, dia maka fanahy fotsiny vao manomboka ny Mac ou ary miverina miasa. Tsy hanome tsiny anao aho raha mandeha amin'io lalana io ianao. Manao izany matetika aho rehefa manana asa be dia be mba hatao, saingy raha manam-potoana ianao dia manasa ahy hanao ireto manaraka ireto.
Atsaharo ny fampiasana Safe Boot
Atomboy ny Mac anao amin'ny alàlan'ny fihazonana ny fanalahidin'ny fanovana ary manosika ny herinaratra eo amin'ny bokotra. Tohizo ny fanindriana ny fanindriana mandra-pahatongan'ny Mac miondana. Ity dingana ity dia antsoina hoe Boat Safe . Mandritra ny fisakafoana Safe, ny Mac dia manao fanamarinana fototra amin'ny rafitry ny directory fanombohana azy. Raha ny zava-drehetra dia tsara, ny OS dia mameno ny kely indrindra amin'ny fanitarana kernel izay mila atao. Midika izany fa tsy misy fanombohana na fisoratana anarana atao, ny endritsoratra rehetra afa-tsy ireo izay ampiasaina amin'ny rafitra dia kilemaina, ary ny cache dynamic loader dia alefa.
Raha toa ka manomboka tsara ny mozika Safe ny Mac, dia miasa ny fitaovana fototra ananan'ny Mac, ary ny ankamaroan'ny rakitra. Tokony hanomboka hanomboka ny Mac amin'ny ankapobeny ianao (manombohana fotsiny ny Mac). Raha ny Mac indray no miseho indray tsy misy olana, dia ny fampiharana fampihetseham-po na mpamily, na karazana fifandraisana misy eo amin'ny apps sy ny fitaovana, dia mety nahatonga ny fikorontanan'ny kernel. Raha toa tsy mitsahatra amin'ny fotoana fohy ny fantsona kernel, dia milazà andro iray na roa ampiasaina, azonao atao ny mihevitra azy io ho tsy fahampian-tsakafo kely fotsiny ary hampiasa ny Mac.
Raha toa ka tsy manomboka ny Mac amin'ny fandefasana fepetra ny Mac, dia mety ny fanombohana na ny endri-tsoratra, ny litera korontana na ny fifandonana amin'ny soratra, ny olana momba ny Hardware, ny file system korontana, na ny olana mpamily / Hardware.
Kitapo fonosana Kernel
Raha vao manomboka ny Mac eo aorian'ny fisidinan'ny kernel, dia ampidirina ao amin'ny rakitra ao amin'ny rakitrao ny Mac izay mitazona azy. Azonao ampiasaina ny fampiharana Console (hita ao / Applications / Utility) mba hijerena ny rakitra crash.
Ao amin'ny sidebar app Consile, tsindrio ny lahatahiry antsoina hoe Library / Logs.
Fanteno ny ordinatera DiagnosticsReporter.
Hotontosaina ny lisitry ny tatitra. Mifantena ny tatitra farany momba ny fianjerana vao haingana.
Azonao atao koa ny mijery ny tatitra momba ny aretina amin'ny alàlan'ny fijerena ny rakitra an-tsoratra hita ao amin'ny:
/ Library / Endriky ny matoanteny / DiagnosticsReports
Azonao atao ihany koa ny manamarina ny fampirimana CrashReporter ao amin'ny Console ho an'ny fidirana amin'ny fidirana ao amin'ny tranokalam-baovao.
Jereo ny tatitra mandritra ny fotoana iray mifandraika amin'ny vanim-potoan'ny kernel. Amin'ny vintana rehetra dia hanome toro-làlana mikasika ny zava-mitranga manomboka tsy ela akory izay vao nambara ny fisamborana.
Hamafiso ny fitaovana ampiasainao amin'ny alàlan'ny fanalana ny zava-drehetra fa ny klavinao sy ny mozika avy amin'ny Mac anao. Raha ampiasain'ny takelaka fahatelo izay mandefa mpamily mba hiasa, andramo ny fanoloana ny fikandrana amin'ny aterineto miaraka amin'ny fampiasana ny klioban'ny Apple. Raha vao tapitra ny zava-drehetra fa ny keyboard sy ny mouse dia esory ny Mac. Raha manomboka ny Mac, dia mila averinao indray ny fizotry ny fanombohana , ny famerenana indray ny fitaovana ivelany ao anaty aterineto amin'ny fotoana iray ary ny famerenana indray aorian'izay, mandra-pahitanao izay fitaovana miteraka olana. Tadidio fa ny fitaovana toy ny router, ny kapila ary ny mpanonta dia mety ho loharanon'ny olana.
Raha mbola tsy afaka manomboka ny Mac anao ianao raha tsy misy fanoheran'ny kernel, dia izao no fotoana hanamarinana fototra sasany. Amboary ny Mac amin'ny fampiasana ny OS X fametrahana DVD na ny fizarana HD ho an'ny Recovery HD . Raha vantany vao booty ny Mac eo amin'ny sehatra fametrahana na famerenana amin'ny laoniny , ampiasao ny Disk Utility mba hanamboarana rakitra fanavaozana amin'ny rindranasa rehetra mifandray amin'ny Mac anao, manomboka amin'ny dingan-drakitra fanombohana . Raha toa ka mihazakazaka ny olana amin'ny fiatrehanao ny fiatrehana ny Rafitra Disk , dia mety ho fotoana hanoloana ilay fiara.
Mazava ho azy, misy ny olana hafa momba ny fiarovana izay mety hahatonga ny fantsona kernel tsy mihoatra ny fiara. Azonao atao ny manana olana momba ny RAM, na koa olana amin'ny singa fototra amin'ny Mac anao, toy ny processeur na ny rafitra. Soa ihany, ny fitsidihana Hardware Hardware an'ny Apple dia mety matetika mahita olana momba ny fiarovana, ary mora ny mihazakazaka:
Ampiasao ny testamenta Apple Hardware amin'ny Internet mba hamantarana ny olana amin'ny Mac
Atsaharo ny fanombohana rehetra sy ny fikirakirana rehetra, ary manomboha indray amin'ny Safe Boot Mode (atsangano ny fanindriana ary ampidiro ny hery eo amin'ny bokotra). Raha vao ny boot ny Mac dia mila manaisotra ny fanombohana sy ny famandrihana ianao ao amin'ny rakitra Accounts na User & Groups.
Misy ihany koa ny fanombohana an-tariby manerana ny aterineto izay ampiasain'ny sasany fampiharana. Azonao atao ny mahita ireto zavatra ireto amin'ny: / Library / StartupItems. Ny singa fanaingoana tsirairay ao anatin'ity lahatahiry ity dia matetika hita ao anaty sora-pamantarana fantatra amin'ny anaran'ny fampiharana, na ny sasantsasany amin'ny anaran'ny fampiharana. Azonao atao ny mampiditra ny raki-drakitra rehetra eo amin'ny sehatr'asa (azonao atao ny manokatra tenimiafan'ny administrateur mba hanosehana azy ireo).
Rehefa tapaka ny fanombohana sy ny famandrihana dia atsangano indray ny Mac anao. Raha manomboka tsy misy olana ny Mac ou, atsangano indray ny fanombohana sy ny fikirakirana ny mombamomba anao, iray isaky ny mandeha indray, averimberina ny tsirairay, mandra-pahitanao ilay iray izay miteraka olana.
Azonao atao ny mampiasa ny FontBook mba hanamarinana ireo endritsoratra napetraka amin'ny FontBook. Avereno indray ny safidy Safe Boot, ary avy eo manomboka FontBook, izay hita ao / Applications. Azonao atao ny misafidy endritsoratra maromaro ary ampiasao ny safidy Font Validation mba hanamarinana ny fahadisoana sy ny rakitra fanoratana.
Raha mahita olana ianao dia azonao atao ny mampiasa ny FontBook hanaisotra ireo endritsoratra manan-danja.
Atsipio OS X amin'ny OS X Update Combo. Manomboha indray ny Mac amin'ny fepetran'ny Safe Boot, raha mbola tsy mandeha ianao, mankanesa any amin'ny tranonkala Apple, ary apetraho ny OS X Update Combo farany indrindra amin'ny rafitra ampiasainao. Ny fametrahana ny Combo Update , na dia efa eo am-pelatan'ny dikan-teny toy ny updater aza ny Mac, dia hanolo ny rakitra sy ny rafitra tsy misy daty misy ankehitriny. Ny fametrahana ny Combo Update dia tsy tokony hisy fiantraikany eo amin'ny data mpampiasa ao amin'ny Mac. Hoy aho hoe "tsy tokony" satria miatrika olana amin'ny Mac isika , ary misy zavatra mety hitranga. Ataovy azo antoka fa manana famandrihana misy anao amin'ny data ianao.
Raha toa ka tsy mahavita asa ny Combo Update, dia mety hihevitra ny hamerenana ny OS X indray ianao amin'ny fampiasana ny fampielezam-peo (OS X hatramin'ny 10.6.x) na ny Recovery HD (OS X 10.7 sy aoriana). Raha ampiasa OS X 10.5 na aloha ianao, dia azonao atao ny mampiasa ny safidy Archive sy Install mba hitahirizana ny fampiasana angona izay efa misy. OS X 10.6 ary tsy manana safidy Archive sy Install. Ny tsara indrindra, ny famerenana ny OS dia hamafa sy hametraka ny rakitra ao anaty rafitra, ka mamela ny fampiasana rakitra mpampiasa. Indray mandeha indray, dia azo antoka kokoa ny manamboatra ny angon-drakitra misy anao vao misokatra na manavao ny OS.
Raha vao manavao ny OS ianao dia mila mandefa Software Update (sakafo Apple, Software Update) mba hampidirana ny Mac eo amin'ny OS amin'izao fotoana izao. Ataovy azo antoka koa ny manitsy ireo mpamily, plug-ins, ary fanampim-panafana. Tsara ny manavao azy ireo indray mandeha, ary averina indray aorian'izay, mba hahazoana antoka fa tsy misy amin'izy ireo no fototra niavian'ny kernel panika.
Raha tsy afaka manova ny fonon'ny kernel ianao
Raha toa ny famerenana ny OS sy ny fanavaozana ny apps sy ny mpamatsy voina hafa dia tsy mamaha ny fonosana kernel izany, fa tsara kosa ny olana amin'ny olana. Aza adino ny manamarina ny fizarana tranainy momba ny fitsaboana eto ambony. Raha mbola manana olana ianao, ny olana dia ny fitaovana anatiny ao amin'ny Mac anao. Mbola azo atao ny zavatra fototra, toy ny RAM na fiara mafy orina izay tsy miasa tsara. Manana fahatsiarovan-doko sy fanodikodinana maro avy amin'ny Mac hafa aho izay mahatonga azy io haingana sy mora hanovana ny fitaovana arahina amin'ny tanjona tranainy, saingy ny ankamaroan'ny olona dia tsy manana ny haitraitra amin'ny departemantan'ny faritra ao an-trano. Noho izany dia raiso ny fakana ny Mac ou ho any amin'ny foiben'ny serivisy Apple iray na nahazo alàlana. Nahafinaritra ahy ny Genius Bar ao amin'ny Apple. Mora ny manao fotoam- pifanakalozan-kevitra, ary maimaim-poana ilay diagnosy.
Atsaharo ny macOS Mail From Spam Filing E-mail avy amin'ny mpanamory fantatra
Mitantana ny Fehezam-boninahitra vaovao ao amin'ny OS X
Fantaro ny fomba famakiana RSS Fehezam-baovao ao amin'ny Mac OS X 10.7 sy ny Mail vao
Hanova ny toerana misy ny toerana sy ny rakitra ho an'ny Screenshots an'ny Mac
Ny fijerena fohy dia mamela anao hijery ny fiara fitetezana sy ny toerana malalaka
Ianaro ny fomba mety hampiasana tabilao sy lisitra ao amin'ny Mac OS X Mail
Fantaro hoe inona ny bokotra Archive amin'ny OS X Mail
Alefaso ny adiresy mailaka amin'ny mpandefa iray ao amin'ny Mac OS X Mail
Ahoana no fomba fampisehoana ireo hafatra maoderina ao amin'ny Mac OS X Mail List
Fomba hijerena amin'ny famandrihana amin'ny famandrihana amin'ny fampiasana iTunes
2.1 Fandaharana Fandaharana Toe-pitenenana Fandaharana Hevitra
Ahoana ny fomba fananganana sy fananganana ireo singa ao amin'ny pejy Internet
Free System Camera Fanaraha-maso
Ahoana ny fampidirana sary eo amin'ny Yahoo! Mail
4G Mobile Networks: Ny Pros sy ny Cons
Tena zava-misy ve ny 3.0?
Nahoana no misy ny lalao finday sasany tsy mivoaka amin'ny Android
Ny 8 Best Touchscreen Laptops mba hividy amin'ny 2018
Blip.tv - Free ny fizarana video amin'ny Blip.tv
Fanandramana hita maso amin'ny sehatry ny ordinateran'ny ordinatera
Ahoana no fomba hanovako ny tenimiafiko amin'ny Windows?
Ahoana no hamahana ny diso nataon'i Ieframe.dll?
Review: NudeAudio Super M sy M Bluetooth Speakers
Ahoana ny fomba hanoratana ireo rakitra Microsoft Office amin'ny iPad
Ny PC-nao dia aretina amin'ny finday diso
Ny Mpanjifa Stereo roa tsara indrindra hividy amin'ny 2018
Miaro ny iPod Classic miaraka amin'ny iray amin'ireo tranga ireo
Ahoana ny fampiasana AirPods amin'ny televiziona Apple anao